Ukushajwa kabusha kwe-PCS: izindlela ezisebenzayo
Gcwalisa kabusha ama-PCS
I-PCS MasterCard iwuhlobo lwekhadi elilayishwa kabusha elikhokhelwa ngaphambili. Siyabonga ngakho, ungenza zonke izinhlobo zokuthenga ngokuphepha okuphelele nobumfihlo, ngoba ayixhumene nanoma yiluphi uhlobo lwe-akhawunti yasebhange futhi itholwa ezindaweni zokuthengisa ngaphandle kokunikeza noma yiluphi uhlobo lwemibhalo noma ukubhaliswa, ihlotshaniswa kuphela umakhalekhukhwini wakho . Indlela yokuthenga efana neselula ekhokhelwa ngaphambili futhi, njengalena, kuzodingeka futhi uqhubekele gcwalisa kabusha ama-PCS lapho ibhalansi yakho iphela.
Uma ungakabi nayo i-PCS MasterCard, kufanele wazi ukuthi iyikhadi eliphelele lokuthenga nge-inthanethi, labo bonke abangenayo i-akhawunti yasebhange, njenge. intsha, noma ohambweni lwaphesheya ngokuzethemba okukhulu. Le nkonzo ifike eFrance ngo-2010 ngenxa yenkampani iCreaCard SA, kancane kancane isisabalele nakwamanye amazwe, njengaseSpain.
I-CreaCard SA ikwazile ukuqongelela ama-euro angaphezu kwezigidi ezi-3 zoxhaso lomkhiqizo wayo Amasevisi Ekheshi Akhokhelwe Ngaphambili (PCS) Futhi manje ungumholi kule makethe wamakhadi akhokhelwe ukuthenga, ukuthumela imali, ukuhoxisa imali kuma-ATM, izinkokhelo ze-inthanethi, njll. Ize yaklonyeliswa ngendondo ye-"Best International Prepaid Card" kuma-Prepadi365 Card Awards, ephinda ngo-2013. Kuyoba ngesizathu ...
Nokho, uma ufuna ukuba nayo noma usunayo futhi udinga ukwazi ukuthi uqhubeke kanjani, kulesi sifundo uzobona izinyathelo okufanele zilandelwe ukwazi ukuthi uyishaja kanjani i-PCS isinyathelo ngesinyathelo.
Mayelana nekhadi le-PCS
Ngaphambi kokuqhubeka nokuchaza ukushajwa kabusha kwe-PCS kwekhadi isinyathelo ngesinyathelo, kungajabulisa ukwazi okwengeziwe mayelana ulithola kanjani leli khadi noma lingasetshenziswa kanjani. Okugqamile yilezi:
Thola ikhadi le-PCS: ingatholakala kunoma yiziphi izinkulungwane ze Izitolo zihlakazeke ezweni lonke noma futhi yithenge ku-inthanethi.
Intengo: ungayithenga ngo-€ 9,90 ngenguqulo evamile noma ukhokhe + € 5 ngenketho ye-PREMIUM, ongakwazi ukuphatha ngayo imali eyengeziwe ngosuku kulabo abaphila impilo ewubukhazikhazi.
Ubuningi bekhadi: ungaba namakhadi we-PCS angafika kwangu-4 ngomakhalekhukhwini ngamunye ohlobene.
Umkhawulo webhalansi: ikhadi linomkhawulo wamakhuphoni wokushajwa kabusha angu-3 ngosuku, kanye nebhalansi enkulu engu-€ 500 yokushajwa kabusha ngosuku. Ngakolunye uhlangothi, i-PREMIUM ikuvumela ukuthi ufinyelele ku-€ 4500 ngosuku lokushajwa.
Ukwenza kusebenze ikhadi
Uma usunekhadi lakho le-PCS, awukwazi ukuvele ulisebenzise, ​​kodwa kufanele ulicule. Ukwenza lokhu, kulula njengokuthumela i-SMS enkonzweni yezwe lakini negama elithi PIN ngosonhlamvukazi bese ilandelwa 8 izinombolo. Uma sekudlule imizuzwana embalwa, izokuthumela i-PIN engakwazi ukushintshwa nge-SMS. Isivele icushiwe futhi ilungele ukusetshenziswa, njengoba ukuvulwa kuyasebenza ngokushesha.
Khumbula ukuthi I-PIN iyikhodi eyimfihlo okukuvumela ukuthi ukhiphe imali kuma-ATM noma ugunyaze ukuthenga. Ngakho-ke, kufanele kwaziwe kumnikazi kuphela.
Hlola ibhalansi yamakhadi ami
Kusuka kumakhalekhukhwini wakho ohlotshaniswa nekhadi le-Mastercard PCS ungakwazi ukuhlola kalula ibhalansi, kufanele nje uthumele umlayezo negama. I-BALANCE kulandelwa izinombolo ezine zokugcina zenombolo yekhadi lakho futhi uzothola i-SMS nebhalansi esele.
Isinyathelo ngesinyathelo ukushajwa kabusha kwe-PCS
Kunezindlela eziningana gcwalisa kabusha ama-PCS. Enye yazo ingenziwa futhi ngezindlela zokukhokha ezihlukene kuwebhu recharge.com, noma ohlelweni lwayo olusemthethweni lwe-Android ne-iOS yamadivayisi eselula. Noma ngabe iyiphi indlela, kufanele wazi ukuthi kunamanani amaningana atholakalayo wokushajwa kabusha, asukela kubuncane be-€ 20 ukuya ku-€ 200 noma ngaphezulu.
Unayo futhi onakho Uhlelo lokusebenza lweselula lwe-MyPCS ongayilanda mahhala ku-Google Play yamadivayisi we-Android naku-App Store ye-iOS. Kusuka kuyo ungenza imisebenzi eminingi:
Hlola ibhalansi kanye nokuthengiselana okwenziwe.
Finyelela kumasevisi engeziwe.
Shaja kabusha i-PCS ngekhuphoni yokushajwa kabusha noma ekhadini lakho lasebhange.
Landa i-RIB / IBAN yakho ukuze wabelane.
Thumela noma yamukela ukudluliselwa.
Dlulisa imali isuka ekhadini le-PCS iye kwenye i-PC.
Hlola imininingwane yekhadi lakho.
Khiya futhi uvule ikhadi noma nini lapho ufuna.
Ukushajwa kabusha kwe-PCS, izinyathelo Yilezi:
Uma uhlelo lokusebenza selilandiwe futhi selifakiwe, ungalivula kuselula yakho ehlotshaniswa nekhadi le-PCS.
Zihlonze ngolwazi olucelayo.
Uma usufinyelele imenyu, uzobona inketho yokushajwa kabusha. Kuyo, kufanele nje ulandele izinyathelo ezikubonisa yona, njengokufaka inani lokushajwa kabusha, idatha yekhuphoni noma i-akhawunti yakho yasebhange, qinisekisa, futhi yilokho.
Ngokushesha ungakwazi sebenzisa ibhalansi ngaphandle kokulindainqobo nje uma kungekho phutha lenzekile. Hlola ukuthi uzilandele kahle izinyathelo, amaphutha avame kakhulu ukungathumeli imilayezo njengoba iceliwe, noma ukufaka idijithi engalungile, njll.
Phezulu kuselula » Amabhange » Gcwalisa kabusha ama-PCS
Shaja kabusha i-BBVA yeselula
Gcwalisa iselula ngekhadi
Gcwalisa iselula kusuka ku-ING
Shaja kabusha iselula ye-La Caixa
Ukushajwa kabusha kwe-TIM
Gcwalisa i-Aldi Talk
Gcwalisa ikhadi elikhokhelwa ngaphambili le-Hype